Muraajacaat Istaraatiijiyah fii ash-sha’n as-Soomaali | isbeddel
← SHUF-BEEL: Tiraab Soomaaliyeed
Unauthorised tapping into or hacking of mobile communication →
Muraajacaat Istaraatiijiyah fii ash-sha’n as-Soomaali
Soodaaniga la yidhaa Xasan Maki waa mid ka mid ah aqoonyahannada carabta ah ee loo daba fadhiisto arrimaha soomaalida. Qoraallo badan oo uu arrimaha Soomaaliya wax kaga sheegayo ayuu leeyahay; as-Siyaasaat as-Saqaafiyah fii As-soomaal al-Kabiir oo kale. Aragtiyaha uu la gaarka yahay ee uu maxfal kasta oo soomaali lagu soo qaado ka yidhaa waa in soomaalidu 30-ka sano ee soo socda noqon doonto awoodda koowaad ee Geeska Afrika, dhaqaale ahaan, aqoon ahaan iyo khibrad dawladnimo ahaan ba. Isaga oo maanta madaxweyne ka ah Jaamacadda Afrika ee Soodaan kuna takhasusay arrimaha Geeska, gaar ahaan Soomaaliya, in ka badan 30 sano na arrimahaa ku jiray ayaa uu haddana qoraa macluumaad khaldan oo uu la yaabayo qof kasta oo wax uun ka yaqaan arrimaha Soomaaliya. Malaha tani waa mid isaga ku gaar ah oo lama qabaan aqoonyahannada kale ee carbeed ee wax ka qora Soomaaliya; sida Xamdi Cabdiraxmaan iyo Cadiya Ciisawi-ga jariidada al-Ahraam. Laakiin mid la isku raacsan yahay ayaa ah in uu qallinka soodaaniga ahi yahay ka ugu macaan uguna shagaarka badan dunida carabta. Saxaafadda iyo fanka ayaa tusaale loogu soo qaataa.
Haddii ay Soodaantu sidaa yihiin, cid kasta oo wax ka barata waxay ku tallaalaan in ka mid ah quruxdaas; ka ugu yar lahjaddiisa ayaa u dananta siiqo qiiro iyo fan ku jiro. Haddaba soomaalida ka liibaantay Soodaan waxa ka mid ah Axmed Mayow, qoraha buuga cusub ee ‘Muraajacaat Istaraatiijiyah fii ash-sha’n as-Soomaali’ oo laba bilood ka hor ka soo baxay Kharduum. Dhowr dal oo Jabuuti ka mid tahay ayaa nuqullo buuggaas ah la keenay, bil ka hor ayaanu Jabuuti iga soo galay. Buuggu guud ahaan dhadhan macaan xiga ayuu leeyahay waxase uu u qoran yahay qaab wacdi diineed ah. Aayado badan, axaadiis iyo waano aan ka duwanayn ta aan masaajidda jimcayaasha ka dhegaysanno ka sakow, qallinka qoruhu waxa uu la daalaa dhacayaa usluubkiisa oo afarta haadba maraya. Waxa iska cad in aanu ugu talo gelin in uu akhriyo qof soomaali ahi, taas oo calaamatu su’aal saaraysa cinwaanka buugga ee la moodo in uu la hadlo cid gudaha ah. Isdiidmo xooggan ayaa markaaba kaa hor imanaysa. Haddii uu rabo in uu nabur caabuqay dhayo muxuu dusha ka salaaxayaa muu gunta xaabiyo? Laakiin waxaad isu afwaajinaysaa bal barasho horteed ha nicin ee hore u yar durug. Adba! Haddana malaha jimidhka yar ee buugga iyo caqliga cusub ee falkay ayaa ku siinaya awood qarsoon oo aad ku idlayn karto.
Mayow, qaddimaad iyo hordhac dabadeed, buuggiisa waxa uu u qaybiyay saddex qaybood: 1. Qayta siyaasiga ah 2. Islaamka siyaasiga ah; iyo 3. Qaybta bulshada. Qaybta ugu horraysa waxa uu isu dayay in uu sharraxo shakhsiyadda soomaaliga ah iyo dusha ay u leedahay dawlad casri ah. Qofka soomaaliga ahi waa mid aan tanaasul lahayn, firfircoon, hiigsi sare leh, danayste ah, jaahil ah, qabyaaladiiste ah, qayrkii fashalin jecel oo aragtidiisa ku dhegsan. Dabadeed waxa uu markaaba raacinayaa soojeedino uu leeyahay waxa lagu horumarin karaa shakhsiyaddaa kakan ee macangegga ah. Haddana, shakhsiyaddaasi sida ay u ekaan karto marka ay siyaasad gasho oo uu ka bilaabayo kheyr iyo shar waxii lagala kulmay ku biiriddii Soomaaliya ee Jaamacadda Carabta iyo ilaa xadka uu qofka soomaaliga ahi Carab yahay ama aanu ahayn. Waxa uu sheegayaa in liibaanta laga helay ku biiridda Jaamacaddu ka buurnaa la’aanteeda isaga oo ka eegaya dhinacyada dhaqaalaha, waxbarashada iyo wacyiga diiniga ah; iyo in qofka soomaaliga ahi—kor uguma dhawaaqayo tan ee hoos ayuu ugu xashaanshaqayaa—ugu horrayn yahay muslin carab ah, soomaali ah dabadeed afrikaan ah! Farbaa taagan.
Shakhsiyadda soomaaligu waxay u baahan tahay cilmi baadhis sida ta uu Cismaan Aadan Cabdulle (ina Aadan-cadde) ku helay Gene-ka soomaalida oo keliya u gaarka ah ee Cx (Rh9) antigen. Waxa se aan badanaa muran sidaas ahi ku jirin sooyaalka soomaalida ee gumaysigii hortii. Si qabow oo aan turxaan lahayn ayuu qoraagu taas u daldalayaa waxayse bislaan la’aan xooggani soo baxaysaa marka uu ka hadlo wadaniyadda soomaalida iyo googgo’a maanta lagu jiro. Waddaniyadda marka uu ka hadlayo waxa uu iska odhanayaa Sayid Maxamed Cabdalla Xasan ayaa ikhtiraacay! Tani waxay i xasuusisay maqaal uu ibraahin hawd kaga hadlay sida ay dad ugu iimaan la’ yihiin buunbuuninta shakhsiyadda Sayidka. Waaba isla ololihii uu sheegay in uu Hawd ku ababay isaga oo cirka maraya. Waa loogu garaabi karaa qoraaga dadaalka uu u galay in uu hadal wanaagsan maqashiiyo carabta “soomaali waa carab sidaa darteed xitaa kuwa dalalka reer galbeedka u guuray waa in ay mar labaad u soo qaxaan dalalka carabta si ay dhaqankooda iyo diintooda u ilaaliyaan!”. Haddana si yar oo fudud uunbuu u odhanayaa ka warran haddii caasimadda Soomaaliya Muqdisho laga raro?! Caasimaddee? Soomaaliyadee? Labada bog ee uu kaga hadlayo dooddaasi uma qalmaan khadka iyo warqadda lagu dhigay. Markaas ka dibna caqabadaha hortaagan dawladnimo Soomaaliyeed ayuu ka hadlayaa isaga oo sheegaya in ay ugu horrayso Xabashida iyo Kukuuyadu.
Qaybta labaad waxa uu sharraxayaa islaamka siyaasiga ah ee Soomaaliya laga bilaabo Waxdaddii ilaa aragtida al-Qaacida ee maanta iyo ta ku liddiga ah ee Suufiyada. Qaab dulxaadis ah ayuu iskaga marayaa isaga oo tijaabadii Maxkamadaha Islaamiga ah sii jiidhaya. Ceebaha dhaqdhaqaaqyada islaamiga ah ee Soomaaliya ayuu ku dheeraanayaa—runtiina badanaa aragtiyaha uu qorayaa waxay u baahan yihiin dib u eegis—waasu dhiirranayaa oo fikraddiisa dhiibanayaa.
Qaybta u danbaysa waxa uu ka hadlayaa qaabdhismeedka bulshada soomaalida isaga oo si gaar ah ugu tutuunsanaya tarbiyad xumaada ay la koraan dhallaanka soomaaliyeed, qabyaaladda iyo reer miyinnimada dawladnimada lagu laaqay. Dhaqanka siyaasadda soomaalida ilaa sida ay hoyga u dhistaan ayuu wax ka sheegayaa.
Buuggani waa hanti aan yarayn oo ku soo biirtay maktabadda soomaaliyeed ee haawanaysa. Mayow in loo mahadceliyo ayuu mudan yahay.
Anwar Axmed Mayow
Sharikatu as-Suudaan li Madaabic al-Cumlah al-Maxduudah, Kharduum
178 bog, 24Cm square
Daabacaadda koowaad: 2011
Posted by Warfaa on Luulyo 11, 2011 in Uncategorized